Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy mpaniraka matsilo ny tahotra | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : tsy mpaniraka matsilo ny tahotra
Indraindray dia jihatra am-pitoerana tsy mahetsika rehefa raiki-tahotra ny tena. Mety koa anefa io tahotra io ihany no manosika any amin’ny fanaovana ny tsy fanao toy ny fiala-nenina ivoahana avy amin’ny loza tazana mitatao. Eo amin’
ny fisehon’ny pesta izay ahiana hiparitaka noho ny fitomboan’isan’ny marary sy ny isan’ireo maty isan’andro, dia matahotra ny vahoaka. Tsy fantatra izay hafitsony na hiandry ny anjarany tsy an-kihetsika, na hirongatra hampihatra fahatezerana vokatry ny tahotra. Mampitahotra ny fitondrana ny mety fampisehoan’ny mponina ny tahotra mahazo azy. Ho jihatra tsy maha-hetsika tsy mahita izay atao intsony ve ny mpitondra, sa hiseho hipepipepy ka sady handeha any ankavia no hiazakazaka any ankavanana.
Araky ny fisehon’ny toe-draharaha dia toa samy mbola mihainohaino ny rehetra. Ny tahotra anefa tsy mihena ka tsy fantatra izay mety haterany. Ny vahoaka tsy afa-doza noho ny pesta tsy mbola resy, ny fitondrana tsy afa-bela eo anoloan’ny tahotra izay mbola sady mikiky ny mponina no manitikitika ny sainy. Tsy tsapan’ny vahoaka mipetraka ny lamina enti-miady amin’ny hetraketrak’ity aretina ity. Fantatra anefa fa toy ny tena fanaovana ady no hany fomba entina andresena ity fahavalo ity. Mbola fanaovana ady saritaka no tazana. Samy mandeha samy mitady dera avy amin’
ny mponina. Ao ireo mampiseho firaisan-kina amin’ny firo
tsahana an-tsehatra sy fandraisana anjara amin’ny fanadiovana ny tanàna, ny sasany kosa mpamonjy mitondra famonjena mivantana mizara fanafody izay tsy ampy iarovan’ny mponina manoloana ity fiparitahan’ny aretina. Tsy misy maharatsy ny fientanam-po sanatria, fa ilay fisehon’ny fiparitahan’ny ezaka no mety tsy hampandaitra azy ka hahavery maina azy fotsiny toy ny menaka ahoso-bato. Tsy ilaina iverenana ny fomba tsy mendrika fandanian’andro amin’ny fifanilihana andraikitra. Ny hany azo resahana dia ny tsy fahampiana fanetren-tenan’ireo manam-bitana ka manan-katao ka maniraka azy ireto hitondra mangigina fandraisana anjara mivaingana eo amin’ny ady andresena ny fahavalo. Ao ny demony kelin’ny fahajejoana, fa ny devoly be mpaka fanahy dia ny fanaovana pôlitika. Tsy mandalo katsa-maina ka na ny fahorian’ny hafa sy ny an’ny fianakaviany aza dia tapitra araraotina avokoa anambazana ny mponina : mampiseho fitiavana anao aho anio, valio fitiavana izany rahampitso rehefa mifidy.